Mashiinka goynta Laser, Mashiinka Laser Engerving, Mashiinka Laascaanood ee Galvo - Laser Golden
Mashiinka goynta Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Leykarka
Mashiinka Jarida Tuubka / Tuubbarka Laser Laser
Waraaqda Dual Birta & Tuubada
Calaamadda, Laabashad, Xarig ka tarjumeysa
Googgoynta Laser Kaarka ah ee loo yaqaan "Laser cut"
Sariir, Mat & Rug Jarida
Maxey tahay sababta dahabka Laser
KU SOO DHAWAADA LACAGTA
GOLDEN LASER wuxuu diiradda saarayaa bixinta xallinta caqli, dijital, iyo otomatik otomaatig ah.
Soosaarayaasha sistemyada laser ee goynta, qorista iyo calaamadeynta. Khabiirka ku takhasusay mashiinka goynta CO2 laser iyo mashiinka laser lasvo.
Laga bilaabo la-talinta koowaad ilaa tijaabooyinka dalabka ee agabyada aad u qaabaysan tahay ee warshadaha gaarka ah ilaa tababarka loogu talagalay isticmaaleyaasha iyo adeegga adduunka - GOLDEN LASER wuxuu bixiyaa xalal laser oo dhammaystiran, oo aan ahayn hal mashiin oo keliya!
MACHINTII LAGU SAMEEYAY
CUTTER Dhimashada laser
Model No: JMCCJG / JYCCJG Taxanaha
Mashiinka Jaridda Xayawaanka ee Laser Automatic Sare ee Automatiga ah
Mashiinkan taxanaha ah ee loo yaqaan 'CO2' laser goynta mashiinka goynta ah waxaa loogu talagalay duubista dharka ballaaran iyo qalabka jilicsan si otomaatig ah iyo goynta joogtada ah. Waxaa ku riixay qalab iyo xamuul leh servo motor, goynta laser wuxuu bixiyaa xawaaraha goynta ugu sarreeya iyo dardargelinta.
Xarkaha loo yaqaan "CO2 Laser Cutter" ee loogu talagalay Dhalmada Dharka Warshaddaha Dharka Kala Duwinta Dharka
Qalabka saxda ah ee saxda ah iyo kuraasta lagu ordo Jarista xawaaraha illaa 1200mm / s. CO2 RF laser 150W ilaa 800W. Nidaamka weelka uumi baxa. Quudiye iskiis oo leh sixitaanka xiisadda. Ku habboon goynta shaandhada shaandhada, go'yaasha shaandhada, polyester, PP, fiberglass, PTFE iyo dharka warshadaha.
Mashiinka Jarida Mashiinka Gooyaha Mashiinka Dulsaarka
Isku darka qaabka weyn ee loo yaqaan 'X, Y axis laser laser (trimming) iyo xawaare sare oo xawaare ah oo loo yaqaan' laser laser perforating '(godadka goynta laser). Waxaa loogu talagalay goynta cutubyada hawo-mareenka (sock duct, sox labo, sock, sock, soct air soct, sock air, soks air)
Mashiinka goynta ee loo yaqaan 'CO2 Laser Laser Machine for Farsamada'
Mashiinka goynta & qalabka loo yaqaan 'laser mashiinka goynta laser-ka ayaa xoog badan oo awood u leh inuu qabto tuubada toosan ee CO2 laser laser. Waxay gartaa xawaaraha sare ee xawaaraha sare iyo xawaareynta goynta iyadoo la adeegsanayo qalabka indhaha lagu duulo.
Galvo & Gantry Laser Engraving Mashiinka Jarida ee Dharka, Maqaarka
Nidaamkan laser wuxuu isku daraa galvanometer iyo XY gantry. Galvo wuxuu bixiyaa sawir xawaare sare leh, taabasho, jajabinta iyo jarista agabyo khafiif ah. XY Gantry wuxuu u oggolaanayaa habeynta astaanta weyn iyo saamiyada dhumuc weyn.
Gaadhiga Mashiinka Duulista Mashiinka Duulista Kaarka Laydhka
Nidaamka firfircoon ee 3D ee Galvo, wuxuu dhammaystirayaa calaamadaynta xariijinta joogtada ah ee hal tallaabo. Tiknoolajiyadda laser “duulista”. Habboon oo ku habboon dharka waaweyn, dharka, maqaarka, denim, Xaraashka EVA.
Xawaaraha Sare ee Xawaaraha Sare ee Galvo Laser ee Kabaha Kabaha
CO2 RF laser 150W 300W 600W. Nidaamka xakameynta galvanometer 3D ee firfircoon. Si otomaatig ah iyo hoos xagga axka Z. Miis shaqeysiiya zinc-iron alloy macaan malab leh.
Qalabka Jarista ee Galvo Laser ee Sandpaper Abrasive Disks
Nidaamyada iskaanka galvanometer-weyn Meelo badan oo laser badan ah si loo kordhiyo wax soo saarka. Quudinta tooska ah iyo dib-u-soo-noqoshada - gudbiyaha…
Subteration Fabric Laser Jarida dharka
Laser Vision-ka wuxuu ku habboon yahay jarista daabacaadda dhar-goosashada dhijitaalka ah ee dhammaan qaababka iyo cabbirrada. Kamaradaha waxay sawiraan dharka, waxay ogaadaan oo aqoonsadaan dusha daabacan, ama waxay ka qaadaan calaamadaha diiwaangelinta daabacan waxayna u gooyaan naqshadaha la doortay xawaare iyo saxnaan.
Mashiinka goynta Mashiinka Laydhka Madaxa ee Labaad ee Madaxa-bannaan
Nidaamka madax-goynta labada madax-madaxeed ee goynta laser-ka ayaa si buuxda loogu daray nidaamka aragtida caqliga leh, waxaana sii wanaajisay shuruudaha ka-shaqeynta sawir-gacmeedka daabacan.
Diiwaangelinta Kaarka Khariidadda ee GoldenCAM
Diiwaangelinta saxda ah ayaa calaamad u ah meelaynta iyo magdhowga qaab dhismeedka caqliga leh ee saxda ah goynta goynta astaanta summadaha, xarfaha iyo nambarada.
Mashiinka goynta Laascaano balaaran oo loogu talagay Calanka, Calaamadaha, Calaamadaha Saxda ah
Qalabka goynta indhaha ee ballaaran ayaa si gaar ah loogu talagalay warshadaha daabacaadda dhijitaalka ah - soosaaridda awoodo aan la isku halleyn karin oo loogu talagalay dhammeystirka qaab ballaaran oo qaab ahaan loo daabacay ama lagu sawiray midabbo jilicsan, calaamado iyo calaamad jilicsan.
Ku wareeji Roll Label Laser Die Cut Mashiinka
Goynta goynta laserlessless-ka iyo badalashada xalka calaamadaynta astaamaha Akhristaha QR code wuxuu taageeraa isu beddelasho toos ah duulimaadka. Tilmaanta BST ee websaydhka ayaa ka dhigaysa fiirinta iyo dib-u-soo-noqoshada si sax ah.
LC230 waa mashiin isku dhammeystiran, dhaqale ah iyo gebi ahaanba mashiinka laser dijitaalka ah oo leh baaxadda ugu badnaan 230mm. Waa ikhtiyaar aad u wanaagsan tartamada gaagaaban ee dhijitaalka ah. Bixinta isbedelka eber muddo waqti ah oo aan qarash dhimayn.
Waxaan bixinaa xalka codsiyada ku saleysan tikniyoolajiyadda laser. Dooro warshadahaaga: xalalka laser ee kugu habboon adiga
SHAQADA & SHAQADA
Iyada oo leh hal-abuurnimo tikniyoolajiyadeed oo xoog leh, Golden Laser wuxuu awood u leeyahay inuu bixiyo mashiinnada laser u gaar ahaaneed iyo xalalka, ka dhigo wax soo saarkaaga mid aad u hufan oo faa'iido leh.
Sida hal abuurka teknolojiyadda cusub, laser wuxuu horumarinayaa iyada oo leh faa'iidooyin aan laqaraneyn, oo lagu beddelayo qaabab dhaqameedyo aad u fara badan.
Darawalka Laser Systems
Laser Systems Buugga
Systems Laser User Buugga
Had iyo jeer bixi adeeg adeeg. Injineerada loo heli karo mashiinada adeega dibada ee adeega rakiba, adeega tababarka iyo adeega dayactirka.
Horumarinta Gudaha Diyaaradaha - Kuraasta Diyaaradaha
Tiknoolajiyada farsamaynta laser-ka ayaa si tartiib tartiib ah u bislaatay waxaana si weyn loogu adeegsadaa gawaarida, duulista iyo dharka & qaybaha isku dhafan. Nidaamka leysarka ayaa hubaal kuu keeni doona shaqooyin kaamil ah iyo faa'iidooyin badan.
Xulashada Wanaagsan ee Loogu talagalay Jaridda Jaridda & Xidhitaanka - Nidaamyada Laser
Goynta goynta iyo qorista laser-ku waa habka ugu fiican ee loo adeegsado akril acrylic. Cillad, nadiif iyo olol geesaha dhalaalaya Qalabka saxda ah ee sare. Habboon oo ku habboon howsha qaabab iyo qaabab kala duwan.
Waxsoosaarka Horudhaca ah Raadinta Sareyn
Bixiyaha Hogaamiyaha Xalka Laser
Shabakada Iibka Caalamiga ah
20 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan warshadaha leysarka, si joogto ah u kobcinta iyo adeegsiga tikniyoolajiyadda horumarsan, GOLDEN LASER wuxuu noqday soo-saare horseed u ah mashiinnada laser oo leh karti is-beddel heer sare ah.
GOLDEN LASER wuxuu ku siinayaa xalal laser xirfadle ah oo ku saabsan warshadahaaga gaarka ah ee wax soosaarka - si lagaaga caawiyo inaad kordhiso wax soo saarka, fududeynta nidaamka socodsiinta iyo inaad macaash badan hesho.
Suuqa dibedda, GOLDEN LASER wuxuu aasaasay shabakad suuq geyn suuqeed in ka badan 100 waddan iyo gobollada adduunka oo dhan, oo ay la socdaan alaabadayada tartan iyo nidaamka hal-abuurka suuqa ku saleysan.
Kaarka loo yaqaan 'CO2 Laser Cutter'
Muuqaalka Laser Cutter
Kala gooyay Laser Cutter
Jarida yar ee loo yaqaan 'CO2 Laser Cutter'
Daabacaadda Dijitaalka ah
Kaarbetka & Mats
Bandhigyo ka socda dunida oo dhan
Beerta warshadaha ee Laser Golden, Wadada Tianxing, Wadada Hengdian, Chuanlong Avenue, Degmada Huangpi, Wuhan, Hubei, Shiinaha